November 16, 2020 - Online Hartha
ခြှေးနံ့ မ နံအောငျ ရခြေိုး ရငျ ဒါနညျးလေးနဲ့လုပျလိုကျပါ…
ချွေးနံ့ မနံအောင် ရေချိုးရင်..ဒါလေးတွေ လုပ်လိုက်ပါ ရေချိုးတဲ့အခါ ရေလောင်းပြီး ဆားနဲ့ ခြေဖဝါးက စပြီး တစ်ကိုယ်လုံး ကို ဆားနဲ့ ရွရွလေး ပွတ်ပေး ပါ။ချိုင်း နှစ်ဖက်ကို လည်းပွတ်ပေးပါ။ အဲဒီလိုပွတ်ပေးတာ က မွှေးညှင်းပေါက်တွေမှာ ပိတ်နေတဲ့ အညစ်အကြေးတွေ ကင်းစင်သွားတာကြောင့် ချွေးနံ့နံတာ သက်သာပြီး ခန္ဓာကိုယ်မှာ ငုတ်နေတဲ့ အခိုးတွေလည်း ထွက်လာစေ သလို ထုံနာ ကျင်နာတွေလည်း သက်သာစေပါတယ်။ အသက်အရွယ် ကြီး ရင့်သူတွေမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ “လူအိုစော် နံ”တာလည်း သက်သာစေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အသက်အရွယ်ကြီးသူတွေဟာ မိုးအုံ့ ရင် ခန္ဓာကိုယ် ကိုက်ခဲတာကိုလည်း ဆား ပွတ် ရေချိုးပေးရင် အကိုက်အခဲ ထုံနာကျင်နာ ပျောက်ကင်းကြ တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ရေမလောင်းခင် ဆားပွတ်မယ် … Read more
အပျို၊ အအို၊ တစ်ခုလပ်များကိုယ့်ရဲ့ ဖူးစာရှင်က ကိုယ့်အပေါ် တကယ်ချစ်မချစ် စမ်းသပ်နည်း(မိန်းကလေးများ သီးသန့်ဖတ်ရန်)
အပျို၊ အအို၊ တစ်ခုလပ်များ ကိုယ့်ရဲ့ ဖူးစာရှင်က ကိုယ့်အပေါ် တကယ်ချစ်မချစ် စမ်းသပ်နည်း(မိန်းကလေးများ သီးသန့်ဖတ်ရန်) လက်ဆန်းနည်းလေးပါ။မိန်းခလေးတွေအတွက်သီးသန့်ပါ။အရွယ်ရောက် တဲ့မိန်းခလေးတွေက အစ အရွယ်လွန် အပျိုကြီးတွေ ..တခါတရံ တခုလပ် အိမ်ထောင်ပျက် အစရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာ ချစ်စကားကမ်းလှမ်းခံရတာ မေတ္တာရှိကြောင်းပြောလာတာ၊ လက်ထပ်ခွင့်ပန်လာတာတွေရှိပါလိမ့်မယ်… ရင်ခုန်ရတာ တဖက်၊ကြည်နူးရတာ တမျိုးနဲ့ နောက်ဆုံးတကယ်ချစ်တာမှ ဟုတ်ရဲ့လား ဆိုတဲ့ စိုးရိမ်စိတ်က ပေါ်လာစမြဲပေါ့၊ဒီပညာလေးကလွယ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လျှော့မတွက်ပါနဲ့ တကယ်မှန်တာ။တကယ်ချစ်မချစ် တွက်စစ်ကြည့်မယ်နေ… အဆင့်(၁) ကို့ကိုချစ်စကားလာပြောတဲ့သူရဲ့ နာမည် အပြည့်အစုံကို ဗေဒင်သင်္ချာဂဏန်းတွေအဖြစ် ပြောင်းပါ… အက္ခရာနဲ့ သင်္ချာဂဏန်းတွဲပြထားပါတယ် ဗျည်း ကိုသာယူပါတယ်..။ အမည်ဗျည်းအက္ခရာ ဗေဒင်သင်္ချာဂဏန်း အ ၊ ဥ ၊သြ ၁ က ခ ဂ ဃ … Read more
Categories အထွေထွေဗဟုသုတ, ဗေဒင်ယတြာ Leaveacomment
အသကျငယျငယျလေးနဲ့ ဆံပငျဖွူနရေငျ လုပျသာကွညျ့လိုကျ
အသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့ ဆံပင်ဖြူနေရင် လုပ်သာကြည့်လိုက်ပါ ဆံပင်တွေပြန်နက်ကုန်ပြီးတဲ့ ဆံဖြူသူတို့ ဆံကေသြာ ပန်မနက်ေ တာ့ဘူးဆိုရင် စိတ်တွေပဲ ထိုင်ညစ်မနေပါနဲ့…နည်းလမ်းလေးရှိပါတယ်… ပင်ကိုယ်ဗီဇ အနက်ရောင်ရှိတဲ့ နတ်သစ်ရွက်က ဦးဆောင် သွားမှာပါ။ အဲ့ဒါက လက်ဖက်ခြောက်ပါပဲ လက်ဖက်ခြောက်ကို မီးနဲ့ ကျွတ်အောင်လှော်ပါ။ နောက်တစ်ခုက သိပ်အရေးကြီးတဲ့ ကြိတ်မှန်ရွက်ကို သိဖိုိ့လိုပါတယ်။ ဆံပင်ပြန်နက်ဖို့ သူ့ရဲ့အကူအညီ ကလည်း လိုတာကိုး။ ကြိတ်မှန်ရွက်က မသိလို့သာရှား တာပါ။ အလေ့ကျလမ်းဘေးေ ပါက်တာပဲ။ ကြိတ်မှန်ရွက်ကို နေရိပ်မှာလှန်း ခြောက်ရင် လက်ဖက်ခြောက် အလှော်မှုန့်(၃)ဆ ၊ ကြိတ်မှန်ရွက် အခြောက်မှုန့်(၁) ဆကို အုန်းဆီစစ်စစ်နဲ့ ရောဖျော်ပြီး နေတိုင်းလိမ်းပေး။ (မပျစ်မကျဲ အုန်းဆီစစ်စစ် နှင့်စပ်ပါရန်) ဆံပင်တွေပြန်နက်တာ ဟုတ်ပမလားတော့ မမေးနဲ့ လက်ဖက်ခြောက် မှုန့်ရယ် ကြိတ်မှန်မှုန့်နဲ့ … Read more
တနျဆောငျမုနျးလအတှကျ စီးပှားလာဘျရှငျစမေညျ့ အကောငျးဆုံးယတွာ (15.11.2020)မှ (14.12.2020)ထိ
တန်ဆောင်မုန်းလအတွက်အကောင်းဆုံးယတြာ တန်ဆောင်မုန်းလဆန်း(၁)ရက်နေ့(15.11.2020)မှ တန်ဆောင်မုန်းလကွယ်နေ့(14.12.2020)ထိတစ်လတာလုံး လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်…။ “​ပန်းကန်လုံးကြီးထဲတွင် ဆန်အပြည့်နီးပါး ထည့်ထားပါ။ အခွံချွတ်ခွာထားပြီးသား အုန်းသီးအလုံးချောတစ်လုံးပေါ် တွင် ထုံး ဖြင့် “ဝ” အက္ခရာ ရေးဆွဲထားလိုက်ပါ။ ၎င်းအုန်းသီးကို ဆန်ထည့်ထားသောပန်းကန်လုံး အလယ်တွင် ထောင်ထားလိုက်ပါ။ အုန်းသီးဘေးဆန်ထဲတွင် ရွှေထီးနှင့်ငွေထီး တစ်လက်စီ စိုက်ထားရပါမယ်။ ထို့နောက် ယတြာစီရင်ထားသည့် ပန်းကန်လုံးကို ကလပ် တစ်ချပ်ပေါ်၌တင်၍ မိမိအိမ်ဘုရားကျောင်းဆောင်ပေါ်တွင် ရိုသေစွာဖြင့် တင်ထားလှုဒါန်းပေးထားပါခင်ဗျ။ အောက်ပါ ဂါထာတော်ကို (၁၂)ခေါက်တိတိ ရွတ်ဖတ်ပေးရပါမယ်။ ” ဥုံ ပထဗျာ အာကာသေ ပဗ္ဗတေစေဝ ဥဒကေ ဝနေ ယံယံ ပတ္တံ ပဝါဒေမိ သဗ္ဗ လာဘသိဒ္ဓိ ဥပေတုံမေ။” ဆုတောင်းစာ အကျွန်ုပ်နှင့်တကွ အကျွန်ုပ်၏တစ်မိသားစုလုံးတန်ဆောင်မုန်းလ တစ်လတာအတွင်း …. ကိုယ်ရောကျန်းမာ၊ စိတ်ရောချမ်းသာစွာဖြင့် … Read more
စိတ်မော၊ လူမောနဲ့ မင်္ဂလာဦးည က ဖြစ်ရပ်… နှစ်ဖက်မိဘ သဘောတူညီမှုနဲ့ အိမ်ထောင်ပြု ကြတယ်။ မင်္ဂလာဆောင်တယ်။ ထုံးစံအတိုင်းပါပဲ။လာသမျှလူတွေကို ပြုံးပြရတယ်။ သိသိမသိသိ နှုတ်ဆက်ရတယ်။ဒီလိုနဲ့ မင်္ဂလာဆောင်ပွဲကြီး ပြီးသွားတယ်။စိတ်မော၊ လူမောနဲ့ ။ ငယ်သူငယ်ချင်း ယောကျာ်းတွေက ‘ခဲဖိုး’ တောင်းတယ်၊ငယ်သူငယ်ချင်း မိန်းကလေးတွေကတော့ ‘ရွှေကြိုး’ တားကြ တယ်။ ကျွန်တော်ကလည်း မငြင်းဘူး။ ပေးစရာရှိတာ ပေးလိုက် တယ်။ ဒါမှ မင်္ဂလာဦးရဲ့ညဦးမှာ လူရှင်းတော့မှာပေါ့။ဒီလိုနဲ့ ညရောက်လာတယ်။ဒီနေ့ညက အရမ်း တန်ဖိုး ရှိတယ်။သူ ရင်ထဲမှာ ဘယ်လိုရှိနေမယ် တော့ ကျွန်တော် မသိဘူး။ ကျွန်တော် ရင်တွေ အရမ်း ခုန်နေတယ်။တစ်မျိုးကြီးပဲ။မင်္ဂလာဦးညဆိုတော့ ရင်ထဲမှာ ရေဆာသလိုလို၊ ဗိုက်ပြည့် သလိုလို။ ဘယ်လိုကြီးမှန်း မသိပါဘူး။အိပ်ရာ စောစော ဝင်မယ် … Read more
(၃)လ တစ်ခါ ပြုလုပ်သင့်တဲ့အိမ်ဆေးခြင်း လာဘ်ပွင့်မင်္ဂလာ…
(၃)လတစ်ခါ ပြုလုပ်သင့်တဲ့အိမ်ဆေးခြင်း လာဘ်ပွင့်မင်္ဂလာ… (၃)လတစ်ခါပြုလုပ်သင့်တဲ့ အိမ်ဆေးခြင်းလာဘ်ပွင့်မင်္ဂလာ သင်တို့အိမ်ကဘုရားတရား ဘယ်လောက်လုပ်နေပါစေ အတိုက်အခံမနာလို မုန်းတီးသူများနေတယ် အေးချမ်းခြင်းမရှိဘူး ငွေလည်းမဝင်လာဘ်တိတ်နေတယ်…။ ကံမကောင်းချက်က ချဲတွေထီတွေမပြောနဲ့ ကံစမ်းမဲဆို၁၀၀တန်တောင်မပေါက်ဖူးဘူးဆိုရင် အောက်ပါအတိုင်းပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပေးပါနော် အချိန်တွေနေ့ရက်တွေမသတ်မှတ်ထားပါ ပြုလုပ်တဲ့ရက်ကပြဿဒါးရက်မဖြစ်ရင်ရပါပြီ… လိုအပ်တာကတော့ ဖလားရေခွက်သပြေညွန့်၃ရွက်နဲ့သရော်ကင်ပွန်းတစ်ထုပ်(ခေါင်းလျော်ရည် လည်းရပါတယ်) ပြုလုပ်ရမှာကဖလားထဲကိုရေနဲ့ခေါင်းလျှော်ရည်(သရော်ကင်ပွန်း)ဆတူမပြည့်တပြည့်လာက်ထည့်ပါ… သပြေညွန့် ၃ရွက်ကိုထည့်ပြီး အောက်ပါဂါထာကို (၁၀၈)ခေါက်ရွတ်ရင်းမိမိနေထိုင်ရာအိမ်ခြံမြေ ပတ်ပတ်လည်ကိုသပြေခက်ဖြင့်ရေတို့ထိရင်း ပက်ဖြန်းလိုက်ပါ…။ ဂါထာတော်…. ဥုံသတ္တံသတ္တံဝလံ ပိတောဒယာဒယာဝီရာ ဗုဒ္ဓေါသက်ကတ်တံ ဘာဝန်တိယဝစ ဒီပို့စ်ကိုအစဆုံးဖတ်သူတွေကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်… ဆက်လက်၍ဖတ်ရှူ့ကြည့်ပါဦးနော် ဆရာအခုတရားရစေတဲ့လူ (၅)ဦးကိုတင်ပြပေးပါမယ်… (၁) လေးစားမှုဆိုတာကိုနားမလည်တဲ့သူမျိုးပါဒီလိုလူမျိုးနဲ့တွေ့တော့ဒေါသကိုထိန်းချုပ်နိုင်လေတရားရလေပါပဲ (၂) သည်းခံတတ်ခြင်းမရှိတဲ့သူမျိုးပါဒီလိုလူမျိုးနဲ့တွေ့တော့ခန္ဓီပါရမီကိုပို၍နားလည်နိုင်တာပါပဲ (၃)သစ္စာနဲ့ဂတိတည်ခြင်းမရှိတဲ့သူမျိုးပါဒီလိုလူမျိုးနဲ့တွေ့တော့ပုထုဇဉ်တွေသဘောပို၍သိလာတာပါပဲ (၄)ဖြစ်လိုတဲ့ဆန္ဒပြင်းပြပြီဒေါသကြီးတဲ့သူမျိုးပါဒီလိုလူမျိုးနဲ့တွေ့တော့ပိုပြီးသည်းခံတတ်လာတာပါပဲ (၅)ရလိုတာပဲကြည့်ပြီးနှစ်ဖက်မျှမတွေးတတ်တဲ့သူမျိုးပါဒီလိုလူမျိုးနဲ့တွေ့တော့ပိုပြီးနားလည်တတ်လာပါပဲဆရာဆီမှာအစွမ်းထက်ယတြာတွေရှိပါတယ်…။ Unicode Version (၃)လတဈခါ ပွုလုပျသငျ့တဲ့အိမျဆေးခွငျး လာဘျပှငျ့မင်ျဂလာ… (၃)လတဈခါပွုလုပျသငျ့တဲ့ အိမျဆေးခွငျးလာဘျပှငျ့မင်ျဂလာ သငျတို့အိမျကဘုရားတရား ဘယျလောကျလုပျနပေါစေ အတိုကျအခံမနာလို မုနျးတီးသူမြားနတေယျ … Read more
လူပိန်ချင်တာမျိုးမဟုတ်ပဲ ဗိုက်ခေါက်အဆီ ၊ ခါးဆီ ၊ ကျောဆီလို အဆီပို တွေပဲ ကျချင်တယ်ဆိုသူများအတွက်
အဆီကျချင်သူတွေ လက်ညှိုးထောင် (တင်ထားတဲ့ စာကို အဆင့်ဆင့်သေချာဖတ်ကြည့်ပေးပါ ဒီထဲကအတိုင်းဖြူ သောက်ပါတယ်) လူပိန်ချင်တာမျိုးမဟုတ်ပဲ ဗိုက်ခေါက်အဆီ ၊ ခါးဆီ ၊ ကျောဆီလို အဆီပို တွေပဲ ကျချင်တယ်ဆိုသူများအတွက် ဆေးနည်းကောင်းလေးဝေမျှပေးပါ့မယ်ရှင် —- အချိန်မကုန် လွယ်ကူ သက်သာတဲ့ နည်းလမ်းဖြစ်ပေမယ့် နည်းလမ်းမှန်မှန်နဲ့တော့ ဇွဲရှိရှိ လုပ်ရပါမယ်။ ပါဝင်ပစ္စည်းများကတော့ — 1- သံပုရာသီး တစ်လုံး 2- ဂျင်း လက် တစ်ဆစ်ခန့် နဲ့ 3- ပျားရည် ၂ ဇွန်းခန့် ပထမဆုံး သံပုရာသီး နဲ့ဂျင်းလက် တစ်ဆစ်ကို အခွံမခွါပဲ ရေစင်စင်ဆေးပါ ။ပြီးလျှင် နှစ်မျိုးလုံးကို အကွင်းလိုက်ပါးပါးလေး လှီးပေးပါ ။ ကော်ဖီ တစ်ခွက်စာ အဖုံးပါသော ကြွေ သို့ … Read more
ကိုရင်လေးတစ်ပါးပူဇော်ထားသော ဘုရားဆင်းတုတော်ကို မြွေဟောက်တစ်ကောင်က လာရောက်ဖူးမျှော်(ရုပ်သံ)
ကိုရင်လေးတစ်ပါးပူဇော်ထားသော ဘုရားဆင်းတုတော်ကို မြွေဟောက်တစ်ကောင်ကလာရောက် ဖူးမျှော်(ရုပ်သံ) ထူးဆန်းလိုက်တာ ကိုရင်လေးတစ်ပါး ပူဇော်ထားသော ဘုရားဆင်းတုတော်လေး အား မြွေဟောက်တစ်ကောင်မှ ပါးပျဉ်းမိုး၍ လာရောက်ပူဇော်ခြင်း​ဖူးမြင်ရသူတိုင်း ကံကောင်းခြင်းတွေ ရရှိပါစေ မြန်မာပြည်ကြီး ငြိမ်းချမ်းပါစေ… ကပ်ရောဂါဘေးမှ အမြန်ဆုံးကင်းဝေးနိုင်ပါစေ… အားလုံးလဲ လိုရာဆုတောင်ပြီး ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါ…။ သာဓုသာဓုသာဓု video credit Unicode Version ကိုရငျလေးတဈပါးပူဇျောထားသော ဘုရားဆငျးတုတျောကို မွှဟေောကျတဈကောငျကလာရောကျ ဖူးမြှျော(ရုပျသံ) ထူးဆနျးလိုကျတာ ကိုရငျလေးတဈပါး ပူဇျောထားသော ဘုရားဆငျးတုတျောလေး အား မွှဟေောကျတဈကောငျမှ ပါးပဉျြးမိုး၍ လာရောကျပူဇျောခွငျး​ဖူးမွငျရသူတိုငျး ကံကောငျးခွငျးတှေ ရရှိပါစေ မွနျမာပွညျကွီး ငွိမျးခမျြးပါစေ… ကပျရောဂါဘေးမှ အမွနျဆုံးကငျးဝေးနိုငျပါစေ… အားလုံးလဲ လိုရာဆုတောငျပွီး ပွနျလညျမြှဝလေိုကျပါ…။ သာဓုသာဓုသာဓု video credit ရုပ်သံကြည့်ရန်…